Ahoana ny fampiroboroboana ny asa-tanana Beer-News-NingBo COFF Machines Co., ltd
Ahoana ny fampiroboroboana labiera fanaovana asa-tanana
Fotoana: 2020-10-27 Comment: 29
Raha ara-tantara dia mifandray akaiky amin'ny fiainan'ny The Times ny labiera hatramin'ny nahaterahany. Tamin'ny vanim-potoana ankehitriny dia namorona kolontsaina labiera tokana izao tontolo izao. Ankoatr'izay, maro ny fiheveran'ny mpanjifa ny labiera, ary ny labiera dia tena mahasalama tokoa ary zava-pisotro mahaliana.
Mba hanasongadinana ny kolontsaina labiera "ankafizo", ny fizarana labiera labiera dia tsy vitan'ny fanaovana labiera tsara fotsiny, fa tokony hialana bebe kokoa, hifanakalozana hevitra mavitrika amin'ny mpanjifa, amin'ny alàlan'ny "misokatra", ny labiera misy ny fahalalana matihanina nampitaina tamin'ny mpanjifa, fanovana eo amin'ny tsenan'ny tsy fahazoana labiera, miaraka amin'izay koa ny mpamorona endrika sy ny fanaparitahana ny fanaparitahana ny kolontsaina. Tena zava-dehibe ny fihavian'ny labiera. Ankoatry ny filazany amin'ny mpanjifa ny fomba hanandrana tsara ny labiera dia tokony holazaina amin'ny mpanjifa ihany koa fa ny labiera vaovao akaiky indrindra no tsara indrindra.
Araka ny fantatsika rehetra, ny fampandrosoana haingana ny labiera labiera dia nampiharihary olana maro. Ho fampiroboroboana ny fivelarana ara-pahasalamana ny labiera labiera, ny Komity Professional Professional an'ny Fikambanan'ny Indostria Sakafo China dia nitady hametraka fenitra indostrialy mifandraika amin'izany, mamaritra tsara ny foto-kevitry labiera fanaovana asa-tanana, ary omeo ny iasan'ny orinasa mpamokatra labiera any Sina amin'ny lafiny akora, teknolojia, tsiro ary antony hafa.
Previous: Fitaovana fanaovana labiera an-trano sy fanamboarana asa tanana hovonoina
Next: Fijerena ny fiandrasana